Puntland oo beenisay eedayanta xildhibaanada gobollada Bay & Bakool. – Radio Daljir
Dowladda Puntland waxay ka xuntahay qaabkii foosha xumaa oo qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka KMG oo ay uga hadleen shir jaraa?id ah oo ay ku qabteen Magaalada Muqdisho, maalintii 12 September 2011.
Kooxdaan Xildhibaanada ah, oo u hogaamiyo dagaal-ooge Maxamad Ibrahim Xaabsade, waxay si cad uga been abuurteen deegaamadda Puntland oo ay ku eedeeyeen in dadka ka yimid gobolladda Bay iyo Bakool in lagu dilo laguna xir-xiro.
Dalka Soomaaliya wuxuu ku jiraa xilli dib-u-heshiisiineed waana ayaan-darro in xubno ka tirsan Baarlamaanka Fedeeralka KMG ah ay noqdaan dagaal-oogeyaal huriya colaadaha iskuna dira qabaa?ilada Soomaliyeed iyagoo isticmaalaya saxaafadda caalamiga ah.
Kooxdaan Xildhibaanada ah oo u dhashay gobollada Bay iyo Bakool ma aysan booqan gobollada ay u dhasheen, iyadoo ay goboladaasi xukumaan kooxaha argagaxisada ah ee Al Shabaab. Kooxdaan ayaan weligood cambaarayn u jeedin kooxaha argagaxisada ah kana naxin xaalada ay ku sugan yihiin shacabka ku nool gobollada Bay iyo Bakool, gobolaadaasoo ay ka jirto baahi iyo burbur baahsan.
Hadana, kooxdaan Xildhibaanada ah waxay si qaldan u isticmaalaan magaca qabaa?ilka iyagoo aflagaadeenaya Puntland oo ah deegaan martigaliya barakacyaasha kasoo cararay gaajada iyo colaadaha ka jira gobollada Somalia oo dhan, gaar ahaan gobollada koonfur.
Waxaa xusid mudan in dhowaan uu Xaabsade la macaamilayay kooxda argagaxisada ah ee Al Shabaab. Bishii Janaayo 2009-kii isagoo xilligaas ahaa Wasiir ka tirsan Dowladda Federaalka KMG ah ayuu Xaabsade hubkii Dowladda ku wareejiyay Muqtar Robow Abu Mansur oo u dhashay Gobolka Bay kana tirsan kooxda argagaxisada ah ee Al Shabaab isagoo xilligaas ku sugan Magaalada Baydhabo. Intaas ka dib ayaa kooxda Al Shabaab
waxay Xaabsade raaciyeen ilaalo gaar ah iyagoo si nabad ah ku gaarsiiyay Magaalada Muqdisho.